I-Valentine ngoFebhuwari 14, 2018 intombi, intombi, intombi intombazana, iifom, imifanekiso kunye novuyo
I-Valentine ngoFebhuwari 14, 2018-ukuchukumisa iinyembezi
Iigentent valentines, imifanekiso kunye namakhadi okubulisa ziya kunceda wonke umntu abonise uthando kunye novelwano ngoSuku lwe-Valentine. Kule holide siyancoma ukuba silungiselele kwangaphambili. Ngeendinyana esazithathayo, ungathumela imiyalezo ebhaliweyo kwisithandwa sakho okanye intombi yakho, indoda kunye nomfazi. I-valentine epholileyo ngoFebhuwari 14, 2018 iya kunceda ukuvakalisa imvakalelo efudumele kumhlobo, ngabahlobo okanye ngabazali. Kufuneka kuphela ukuba siqhelane nemimiselo yethu yovuyo kwaye sikhethe okulungileyo phakathi kwabo.
Usuku olungcono kakhulu lweSonto kaValentine ngomhla kaFebhuwari 14, 2018 - imibongo ngokuvuyisana
Into ephambili kuyo nayiphina i-valentine iyilwe kwaye itekisi. Ngosizo lwabo, unokubonisa iimvakalelo ezifudumeleyo kubahlobo bakho nabathandekayo. Thabatha iimbongo ezintle ngokuvuyisana ngamakhadi kaValentine ka-Valentine ngoFebruwari 14, 2018, phakathi kwemizekelo ekhethwe nguwe.
Okuncoma kakhulu kwimibongo yokuzalisa i-valentines ngoFebruwari 14, 2014
Iingoma ezincinane zingasetyenziselwa ukuzalisa amakhadi athengiweyo okanye ayenziwe. Sakhetha iinqweno ezinqwenelekayo kunye nokunyanisekileyo kubahlobo, abazali kunye nehafu yakho.
Ndiyayinika intliziyo yam igunya:
Kuyo kukho uvuyo, ububele nothando.
Ndifuna umphefumlo wam,
Ndibhalela umbongo kwakhona!
Yeka intliziyo ngexesha elithile,
Njengoko kwintsimi yeentyatyambo eziqholiweyo.
Kodwa ndiyakholwa, ndiya kuyifumana ngokungazi
Ndomphefumlo womnye umntu u-spark!
Ngoku ndivumele ukukuhalalisela
Ngaloo suku oluhle.
Uthando, njengemyuziyam, mzukise
Ngomphefumlo wam onesizungu!
I-valentine yam kuwe kuwe isithunywa samandla aphakamileyo, esalathiswa ngesandla sam nothando, esibizwa ukuba sibophe imiphefumlo yethu kunye kwaye sibuye sihlangane nemizimba ngokuphefumula omnye emva kwexesha lobudlelwane bethu lobudlelwane ludlulela kwisigaba sobudlelwane phakathi kwabantu abanothando.
Bangaphi babo? Musa ukubala!
Zonke iintliziyo ezisemfanekisweni
Eli holide lithandwa,
Ezo ntliziyo zivakalelwa nje kuphela!
Ndiza kukuphawula ngonaphakade,
Ndikunika ubomi bam njengesipho!
Yamkela okanye cha -
Kwimi wena ilanga!
Uyazi, ndaya kumlambo,
Apho amanzi anqabileyo -
Kuzisa intliziyo -
Ikhadi likaValentine ukusuka kwiqhwa.
Kodwa uthando lwam lufudumele,
Kunomlilo ovela kwikhandlela ezilikhulu.
Mhlawumbi ndikwazi ukuyihlanganisa ndawonye
Intliziyo inkulu kuwe.
Ngaba uya kugutywa kuphela?
Ukutshisa? Uphila -
Ndingayithanda njani itywina yam?
Ehlabathini akukho na ikhadi leposi,
Akukho mntu uthengisayo,
Ndiya kunika intliziyo yam.
Namhlanje, abathandi baneholide,
Ndiyathemba ukuba uyayikhumbula!
Ngemihla ngemihla uphikisana.
Neemvakalelo eziyimfihlelo ungumbalisi,
Kwaye entliziyweni yentsingiselo ebalulekileyo,
Ithemba lam leveli!
Ndiyothusa kwiingcamango zam,
Kwaye ndivakalelwa ngenyameko -
Ifilosofi enhle iyathandwa!
Iimpawu ezifanelekileyo zevidiyo ze-valentines ngoFebhuwari 14, 2018 ngokuvuyisana kwivesi
Mncoma kakhulu abathandekayo kwiindinyana banokukunceda kunye ne-video-valentines yasekuqaleni. Khetha inqaku elihle lokuvuyisana phakathi kwemizekelo engezantsi ayikho nzima.
I-valentine yamnandi ngoFebruwari 14 intandokazi ka-2018-ukukhethwa kweefoto
Ukuvuyisana nomntu onomthandayo akakwazi ukuthenga kuphela amakhadikhadi, kodwa imifanekiso eqhelekileyo. Sithatha imifanekiso ngamahlaya, sivuyisana kunye nemifanekiso emihle. Ezi valentines zingathunyelwa ngoFebruwari 14, 2018 kwiqabane lakho elithandayo okanye umyeni.
Imifanekiso emihle-i-valentines kumfana othandekayo, umyeni wakhe ngoFebruwari 14, 2018
Siye sakhetha imifanekiso kaValentine ongayithumela kwizithunywa zangoko, iintanethi zentlalo. Abafanelekanga nje kuphela "kwiimitha" zangoku zabafundi bethu. Iipascards ezimnandi kunye nemifanekiso ingathunyelwa kwintombi okanye indoda.
Iifolthi ezimfutshane kwiSMS ngoFebruwari 14 - ukukhethwa kweengoma ezilungileyo kakhulu kwiinyembezi
Iindinyana ezincinane zikulungele ukuthokoza abathandekayo bakho kunye nabahlobo ngeSMS. Kunconywa ukuba ithumele imilayezo eneentsimbi, ukumemeza okumibalabala okanye i-hyphas. Izongezo ezintle ziza kugxininisa i-prikolnyvalentinka kwiindinyana ezimfutshane, zithunyelwe kubahlobo kwiholide ngoFebruwari 14.
Ukukhethwa kwe-SMS-valentines ezimfutshane kakhulu ezinyembezi ngoFebruwari 14
Phakathi kweentlobo zeSMS esiziqokeleyo, unokufumana iindumiso ezinyembezi kwiindinyana, kunye nemisebenzi ehlekisayo. Imibhalo emfutshane ifanelekileyo yokuzalisa amakhadi amancinci athengwa okanye ayenziwe ngezandla zabo.
Ndifuna ukukugubungela kwaye ndilawule, thintela imilomo yakho, kungekho kwiingcamango zakho - ngokwenene kwaye uhlebeze indlebe yakho - "Ndikunye, ndithande njengokuba ndikuthanda" ...
Andizange ndiyithande nabani na kakhulu kwaye andiyi kuthanda, nangona andiyivuli intliziyo yakho kuwe, ndihlala ndigcina umfanekiso wakho kuyo.
Ngosuku lukaValentine Ndivuma: Ndiyakuthanda, kwaye ndiyathemba ukuphindaphinda. Undiphendula, ndilindele.
Vumela i-rastaet kwi-sertce ldynka - prachyta yam valentynka!
Uthando! Uthando luhlukile! Uthando! Akukho ntloni kulo! Uthando, ukuba wonke umntu uyibone, kwaye athi: Nguwe!
Intombi yamantombazana e-Funny valentine ngoFebruwari 14 wonyaka - ukhetho lweposi neephoto
Umhlobo othandekayo makamdumise ngoMhla Wabo Bonke Abathandi. Kule meko, ungamthumeli nje ngeposikhadi, kodwa kunye nesithombe kunye namahlaya, imifanekiso emnandi. Sithatha iigentines ezithandekayo nezingaqhelekanga ngoFebruwari 14, 2018, ezifana nabahlobo bokwenene.
I-valentines ezintle kwiifoto kunye neepastadi ze-Valentine's Day ngoFebruwari 14 ngomhlobo
Ngathanda intombi yakho yonke into efanelekileyo kwiSuku lweValentine ngeendlela ezahlukeneyo. Umzekelo, thumela i-SMS yakhe, unike ikhadi leposi kunye neebongo. Kodwa nakwabafundi bethu abanobuchule abano-anti-valentines. Imifanekiso enjalo kunye namahlaya kuya kubangela ukuba ummam
Mhle kwiinyembezi ze-valentine ngoFebruwari 14 intombazana-ukhetho lwemibongo yintanda
Usuku lwabathandani bonke abanomonde ongenakulinganisela ukulinda abafazi. Enyanisweni, ngeli holide, amadoda abo abathandayo baya kubanika ingqalelo kwaye baveze iimvakalelo zabo. Kubameli beesondo eziqinileyo, sithathe iimbongo zangaphambili ngokuvuyisana
I-Valentines, ithunyelwe okanye ithunyelwe kumantombazana ngeeholide ngoFebruwari 14.
Mhle ukulila iindinyana zeentendelezo zeeholide ngoFebhuwari 14 ngentombazana ethandekayo, umfazi
Sikhethile iindinyana ezintle zeendinyana zendoda zingathumela intombazana okanye intombazana intombazana ngoFebruwari 14 kwisigijimi somyalezo, isithunywa okanye intanethi. Ukuthintela izibhalo kuya kubongoza bonke abesifazana.
Uthandekayo, unomusa kunye nobumnene,
Kwaye kubaluleke kakhulu, yedwa yam,
NgoSuku lweValentine ungenakulinganiswa,
Usuku lwabathandwa, lethu holide!
Uninzi kakhulu, maxesha amaninzi
Ndi thumela i valentine
Kwaye ndiyifumene ukuvuma
Ndiyanincoma ngokuvuyisana kwam
Iindinyana ubusuku bonke endazibhala
Amazwi othando ahlelwa kwakhona!
Kwaye ekugqibeleni kwavela:
Yintoni ngaphandle kwakho, ndingaphantsi kwe-kapec ...
Ndididekile ngubukeka bakho bububele
Ngamafutshane ... Ndiyakuthanda!
Kubafundi bethu, sithatha iigentines ezisekuqaleni kwimifanekiso kunye neefowuni, ifoto. Ngemizekelo yethu, abafundi banokukhetha iimbongo ezintle ngokuthokoza. Baya kunceda ngokucacileyo ukubulela nokuhlonela intombazana ethandekayo, umfazi. Kwakhona, into enhle kwiinyembezi ze-valentine ngoFebhuwari 14, 2018 ingathunyelwa kumyeni wakhe okanye kumfana wakhe. Imifanekiso ethandekayo kunye novuyo ngamahlaya aphelile ukuvuyela abahlobo kunye neentombi.
Iipastadi ezivela kwiSonto likaValentine. Imisebenzi yobuhle ekhaya
Ukubhiyozela Usuku LukaValentine?
Indlela yokwenza i-valentine ye-volumetric ngoFebhuwari 14 ngezandla zakho
Siyavuyisela ngoFebhuwari 14, 2017 kumntu oyintanda yakho, indoda kunye nendoda kwindinyana kwaye uphendule ngamagama akho - Uvuyiso olumnandi kwiSonto likaValentine kwiintombi zakho ezithandekayo nomfazi - imifanekiso emnandi kunye neesms
Ukungabi namavithamini kumntwana omncinane
Ukupheka kwezitya zasekhaya zaseJapan
Kutheni le ntaka ingqongqo kwifestile?
I-horoscope yama-astrological ngosuku lokuzalwa
Indlela yokulahla iimvakalelo zomama zecala?
UMakarsky wabonisa isithombe sokuqala somntwana osandula
Iimpembelelo zeziqholo kwizengqondo
Indlela yokujonga ubungakanani bekhati
Iingcamango zevidiyo zevava
Yintoni eyahlula abantu abaphumeleleyo
U-pranker wase-Ukraine wathumela ividiyo yeKsenia Sobchak ngaphandle kwesisu
Iikhukhi ze-almond-oatmeal ne-jam
Ingulube kunye neziqhumane kunye nama-apricot omisiwe